Sararaa fi Halatoota Xiyyaa Fe'u
Sararootaa fi akaakuulee xiyyaa wal yaadamu dandeessa. LibreOffice'n faayiloota halata waaltawoo kan galmee keetirraati fe'u fi fayyadamu dandeessu si keena. Yoo barbaadde, maalimoota faayilii halatarraa haqu ykn irratti dabaluu ykn immoo faayilii halata.
Halatoota sarara faayilii fe'uuf:
Dhangi - Sarara fili, kana booda cancaala Halata Sararaa cuqaasi.
Qabduu Halatoota Sarara Fe'i cuqaasi.
Faayiloota halatoota sararaa fe'uu barbaaddu of keessaa qaban mul'isi, kana booda TOLE cuqaasi. Faayiliichii dhangii [maqaafaayilii].sod jedhuu qabaata.
Halatoota sarara faayilii Olkaa'uuf, qabduu Halatoota Sararaa Olkaa'i cuqaasi, maqaa faayilii galchi, kana booda TOLE cuqaasi.
Dhangi - Sarara fili, kana booda Cancaala Halatoota Xiyyaa cuqaasi.
Qabduu Halatoota Xiyyaa Fe'i cuqaasi.
Faayilii haalatoota fe'u barbaadduu of keessaa qabu mul'isi, kana booda TOLE cuqaasi. Faayiliichii dhangi [maqaafayilii].soe. jedhu of keessa qabaata.
Halatoota Xiyyaa faayilii Olkaa'uuf, qabduu Halatoota sararaa Olkaa'i cuqaasi, maqaa faayilii galchi, kana booda TOLE cuqaasi.
Dhangii - Sarara
Title is: Sararaa fi Halatoota Xiyyaa Fe'u